DA leader Mmusi Maimane is still to receive a response for a request to meet with Zimbabwe's president, Emmerson Mnangagwa. File picture: ANA
By Tamaryn Africa Feb 22, 2019
Johannesburg - Three weeks after the Democratic Alliance (DA) leader, Mmusi Maimane threatened to travel to Zimbabwe he is still to receive a response for a request to meet with that country's President, Emmerson Mnangagwa.
Last month, the DA leader said he wrote to the Zimbabwean President not only to request a meeting with the Zimbabwe government led by Mnangagwa's Zanu-PF party, but also to be allowed to engage with civil society and opposition leaders.
Responding to queries on the matter DA national press office acting manager, Marshalle Frederiks, on Friday said: "The leader’s office has informed me that they are awaiting a response from the president of Zimbabwe on their request for a meeting".
However, reports from that county said authorities had vowed to prevent Maimane from entering Zimbabwe